Qoor Qoor oo Deni kula kulmaya Gaalkacyo | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor Qoor oo Deni kula kulmaya Gaalkacyo
Labada Madaxweyne ayaa waxaa ay ka wada hadli doonaan xaalada Gobolka Mudug oo ay kusoo bateen falalka Amni darro oo ay geysanayaan Al-Shabaab iyo Colaad Beeleedyada.
GAALKACYO, Soomaaliya - Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni yo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxaa la filayaa in gelinka dambe ee Maanta ay safar ku tagaan Magaalada Gaalkacyo, ee Xarunta Gobolka Mudug.
Madaxweyne Deni oo haatan ku sugan Magaalada Garoowe ayaa waxaa safarkiisa ku wehlin doona Xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Puntland, waxaana la sheegay in uu Gaalkacyo kula kulmi doono Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor).
Labada Madaxweyne ayaa waxay ka wada hadli doonaan, sida aya wararku sheegayaan xaalada amniga ee Gobolka Mudug oo ay kusoo bateen mudooyinkii dambe qaraxyada ay geysanayso Kooxda Al-Shabaab iyo Colaad Beeleedyada.
Sidoo kale, Deni iyo Qoor Qoor ayaa si weyn uga hadli doona arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliya oo uu muran ka taagan yahay, iyadoo Axmed Madoobe iyo Deni aysan weli dowladda u soo gudbin Guddiyada doorashooyinka Heer Dowlad goboleed.
Qoor Qoor oo safaro ku yimid Muqdisho ayaa waday qorsho uu ku dhex-dhexaadinayo Musharixiinta diidan Guddiyada doorashooyinka Rooble magacaabay, kuwaasoo aan loo marin dhismahooda nidaam sharci ah, oo waafaqsan heshiiskii doorashadda Sep 17.
0 Comments Topics: galmudug puntland soomaaliya